Asoosama Xalayaa Hayyuu Kutaa 5ffaa - OPride.com
[audio:http://www.opride.com/hamba/audio/Xalaya/XH kutaa 5ffaa.MP3|loop=yes]
“Harraagessi boddichi” jedha wonni akka mata dureetti mataa barruu, fuula duraa irra jiru. Gad hiixxee yoo laaltu akkuma Damboobaan jedhe wolaloo woyiiti. Barruun sun maal akka jedhu hin beettu. Beekuu ammoo barbaadde. Gara kaayuuf deemtutti dubbisuu hin dandeettu. Ammuma waan inni jedhu yoo laalte hoo? Hin yaadde. Yoo uduu dubbiftu namni itti dhufe hoo? Damboobaanillee “dafii manaa baasi” hin jenneenii? Hanfalaa hidhatte gubbaan gaabii uffattee, woraqaa san garaa keessa gad kaayattee, mana aaraa seentee, ibidda itti keette. Gara manaa ol deebitee dabtaraa fi qalama woyii fuute. Gad deebitee, mana aaraa seentee, kursii woyii kaayattee, woraqaa san fuutee bante. Mucaan ammoo manuma guddatti xalayaa abbaa isaatii barreessu woliin jira. Ibiddi itti keette, diqqoma tunnisee, mallisuu jalqabe. Namni shakkitullee yoo ka dhufu ta’e dura karra moonaa isaanii ta cufaa jirtu dhadhayuu qaba. Dubbisuu jalqabde.
Dubbiftee kaate. Wonni wolaloon sun jedhu hin galleef. Irra deebitee dubbifte. Diqqoo ifeef. Itti tole. Irra deebite.
“Harraagessi boddichi, inni waan nyaatu dhabee
Lafee qorqaa waakkisu, tararee laga labee,
Gaaf tokko, ni beelayee,Dhaabatee mala dhayee,
Gaqqajeele waakkisaa,Yaafatee awaannisa.
Moggaa lafa ormaa gahee, karaa dhabee rakkaanaan,
Ta wolii wollaalchifte, isiin hoolaa fakkaatu,
Moggaa lafa ormaatti,Worra liqimsaa malee,
Dhaddee, saree, karkarroo,booyyee, amaa, woraaboo
fi rumichaan marii gahee,
Ka ufirraa dadhabnee,
Taa’anii du’uu mannaa deemaatiin du’uu woyyaa,
Ka eennuunillee hin fillee, ka eennuufilleen tolle,
Ka eennuunillee hin hille,
Lammacha ilkee dachaa’
Jedhee itti dubbatee, achiin karaa argatee,
Ta’ee harraagoon fira,
Kunoo haga ardhaa jira.
Qe’ee keessa shushula, badi bada yaa amaa,
Luuxee kinniisa fixee, saameetiin nyaata damma,
Oorruu qullatti hambiftee,
Dhaddeen dinnichaa dabdee,
Qe’ee keessaa yuyyuusaa,
Hantuunnis mana keessaa, cicciree fixe teemsaa.
Jeedaloon hoolaa fixxee, afaan dhiiga dibattee,
Bobbaasee awaannisa, akka malee waakkisa.
Harraagoo fi awaannifni, silaa karaa hin qabanii,
hin yaannetti irkatanii,
Mana namaa seenanii…
Ka barbaadan fe’anii, kanaan furmuu dhabanii,
Bosonatti duulanii, isallee haphisanii,
Bosona keenna kana, hin barbaadanii jiraachuu,
Inni tokko ejersaa, waaccuu dhaa fi woddeessaa,
Saatoodhaa fi harooressaa,Bulchaanaa fi gatamee,
Sukkeedhaa fi maraaroo,
Dhaddachaa fi daannisaa,
Lakkoofneen baanu keessaa.
Isaan maruma keessaa, inni tokko ni ciraa,
Irra caalaan isaanii, yoo aaranii gubatan,
Kan jirre bar hindheessaa.
Mukni qottoodhaa yaa’ee,
Dhagaarratti wol gahee,
Fira kan kee jibbitee, diina keen wol qabattee,
Sanyii kan kee hin nyaattuu, ufumaan uf hin nyaattu.
Dabaa keennaani malee,
qottoon yoom humna argatte?
Bosonni wolitti haasayee,
ka’ee malasaa dhaye.
Amma murtiirra haa geennuu,
daddabaa maraan dhiifnuu,
Bulchaanaa fa’a haa cirruu,
mee itti wolii gallee,
Isaan kaa ka daboolee,
qottoodhaan wolii galee.) 2x” ka jedhu irratti dhumata wolaloon sun.